Xirsi Xaaji Cali Xasan oo aan ka waraysanay buuggiisa cusub ee 'Miyiga ilaa Madaxtooyada' - BBC News Somali
Xirsi Xaaji Cali Xasan oo aan ka waraysanay buuggiisa cusub ee 'Miyiga ilaa Madaxtooyada'
Magaalada Hargeysa waxaa buug ku soo bandhigay wasiirkii hore ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Iskeed ugu Dhawaaqday Madaxbannaanida ee Somaliland, dowladdii Axmed Maxamed Siilaanyo, Xirsi Cali Xaaji Xasan, haatanna ah hogaamiyaha xisbiga Waddani.
Buuggan oo lagu magacaabo `Miyiga ilaa Madaxtooyada` ayuu Xirsi uga hadlayaa noloshiisii iyo intii uu xilka hayay, go`aannadii ugu adkaa ee uu qaatay iyo waxyaabihii ku kallifay inuu ka diga-rogto xisbiga Kulmiye.
Xisbiga mucaaradka Wadani oo shir uu uga furmay Hargeysa
Waddani oo ololaha doorashada ka billaabay Somaliland
Buuggan oo dhawaanahan qabsaday baraha bulshada, islamarkaasna laga dhiibtay aragtiyo kala duwan ayaan wareysi kala yeelanay qoraha buugga, mudane Xirsi, sida hoose ayuuna wareysiga u dhacay.
Su`aal: Maxaa kugu kalifay in aad buuggan qorto?
Jawaab: Marka koowaad waxay tahay inaan tijaabiyo hibada uu Eebbe siiyay bani`aadamka, bal inay suurtogal tahay inaan qoraa noqdo, marka labaad maaddaama aan siyaasi ahay inaanan qoraalka uun ku koobnaan oo aan bulshada la wadaago waxyaabaha kale oo uu qoraalku ka mid yahay, midda saddexaad waxay tahay qoraalka iyo akhrisku waxay kordhiyaan garaadka iyo maskaxda. Waa inaan waayihii nolosheyda bilowgii ilaa halkaan maanta joogo aan wax ka qoro, inaan ku dhiirrado inaan soo tebiyo dhacdooyinkii kala duwanaa ee intaan xafiiska joogay.
Su`aal: Waxaad buugga ku sheegtay in madaxweynihii hore ee Siilaanyo markuu xilka hayay muddo labo bilood ah inuu sheegay in xusuustiisu aysan wanaagsaneyn, sidaa darteedna uu doonayo inuu is casilo. Waxada tiri waxaan u imid isagoo is beddelay oo ay qoyskiisu beddeleen, marka maxaa sidaa loo yeelay oo ugu muhiimsanaa?
Jawaab: Sidaan xusay wuxuu ka walwalay in xusuustiisu ay hoos u dhacday, anigu kumaan qorin buugga in xusuusta uu beelay, mana sheegin heerka (percentage-ka) ay xusuustiisu hoos u dhacday, qof walba oo waayeel ah iyo qof walba oo shaqo noocaas ah haya xusuustiisu hoos bay u dhacdaa, aniga qudheyda sidii aan ahaan jiray ma ihi. Marka maaddaama marka ay xusuustiisa hoos u dhacday uu damcay inuu ka tago shaqada, waxay tilmaameysaa inuu yahay qof sharaf leh oo aan dooneyn inuu dadka luggooyo, balse markii dambe isagaa naftiisa naga yaqaannee, markii isaga iyo qoyskiisu ay tashadeen wuxuu gartay inuu sii wadi karo dalka oo uu talin karo. Siilaanyo sida lagu yaqaan ma aha nin lagu yaqaanno inuu kursiga ku dhego, ee wuxuu ahaa nin haddii ay ula muuqato in uusan dooneyn dareenkiisu, iskaga taga oo xilka iska casila.
Su`aal: Waxaad buuggaaga bogga 202 ku sheegtay in ganacsade Maxamed Awsiciid uu lacag badan ku taageerya madaxweyne Muuse Biixi xilligii ololaha doorashada, lacagtaas oo malaayiin doollar gaareysay. Waxaad kaloo sheegtay in xisbiga Waddani uu lacag u ballan qaaday, waa adiga oo Xirsi ah iyo haddii saaxiibbadaadii kale uu Cirro iska kiin hortaagi lahaa inaad xisbiga gashaan, lacagta noocaas ha saameyn intee la eg ayay ku yeelaneysaa siyaasi maalgeliyay madaxweynaha imika talada dalka haya?
Jawaab: Ganacsatadu, Yurubta aad joogtaba way sameeyaan inay la kala saftaan xisbiyada, taas un bay la mid tahay inuu la safnaan jiray xisbiga Kulmiye ee aan ka mid ahaa, iyo inuu dhisayay musharraxaas, waa mid aan muran ku duugneyn, haddaad i weydiisay qodobkaas lacagta, xisbi walba ced baa taageereysay wax weynna uma arko, aniga dhacdada unban werinayay.
Su`aal: dhanka kale bogga 145 waxaad ku sheegtay in waxyaabihii markaaba buuqa geliyay xukuumaddii Siilaanyo ay ka mid ahayd in internet-ka cable-ka ee badda hoosteeda, sida ganacsade Maxamed Awsiciid uu doonayay loo xiro, waliba waxaad sheegtay in dadkii ergada ka ahaa ee u ololeynayay ii ka mid ahaa Muuse Biixi, waliba uu ka mid ahaa dadkii yiri yaan dastuurka la jebin, arrintaas markii dambena waa oggolaateen, marka arrintaasi miyaanay ahayn khalad ilaa imika taagan?
Jawaab: Sidaan buugga ku qoray wuxuu doonayay in isaga gaar looga dhigo laakiin lagama yeelin, markii dambe ruqsadda waa la siiyay. Muuse Biixi wuxuu markii hore ka mid ahaa dadkii wax la doonayay ganacsadaha laakiin markii dambe wuxuu yiri yaan dastuurka la jebin ee aan xal kale raadinno.
Su`aal: Maxaa ugu weynaa waxyaabihii kugu kallifay inaad Kulmiye ka baxdo?
Jawaab: Waxaan ku kala beyrnay madaxweynaha, aragtidii mustaqbalka yaa madaxqeyne noqonaya sidee loo maamulayaa, isagaa madaxweyne ahaaye markii uu go`aan qaatay waan ku qanci waayay waana isaga tegay.